ဂန္ထ၀င် အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုများရှိ အမျိုးသမီးတို့၏စွမ်းဆောင်ချက် (၂) - News @ M-Media
in ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ / ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ / ဆောင်းပါး — June 27, 2016
ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၆
ဒိုင်ဖာ ခါတွန်ဆိုသည့် မွတ်စလင်အမျိုးသမီးကြီးက ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသွားခဲ့သည့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အဲလစ်ပိုမြို့မှ Firdaws ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် မဒ်ရာဆာ စာသင်ကျောင်း
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာမှာ လက်ရှိပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ့်သမိုင်းကြောင်းရှိ အမျိုးသမီးတို့၏အခန်းကဏ္ဍကို ပြန်လည်နေရာပေးရန် အားထုတ်လာသည့် လုပ်ရပ်အချို့ ရှိလာပြီး ၎င်းတို့အနက် ဥပမာနှစ်ရပ်အား အောက်ပါကဲ့သို့ တင်ပြပါမည်။
၃(က)။ မုဟဒ္ဒိဆဟ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း စီမံချက်
ဒေါက်တာ မုဟမ္မဒ် အကရမ် နဒ်ဝီသည် အစ္စလာမ့်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဟဒီးဆ်(တမန်တော့်သြ၀ါဒတော်နှင့် ဓလေ့များ)ဆင့်ပြန်ခြင်း၌ ပါဝင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ အတ္ထုပ္ပတ္ထိများကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ရေး အတွက် ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ရပ်အဖြစ် နှစ်အတန်ကြာအောင် ဦးစီးလုံးပန်းခဲ့သည်။ (Foot Note 1)
ဟဒီးဆ်များကို လေ့လာပြီး ပြန်လည်ပို့ချခဲ့ကြသော မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတို့၏ ဘ၀မှတ်တမ်းအဘိဓာန်ကို သူရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အရဗီဘာသာဖြင့် အတွဲ ၄၀ အထိရှိကာ ၎င်းကို အနှစ်ချုပ်၍ သူကပင် ပြန်လည်ရေးသားတင်ပြခဲ့သည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို ဘ၀နေနည်းစနစ်အဖြစ် နားလည်လာအောင် မဟာလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သော တမန်တော်မြတ်၏သွန်သင်ချက်များအား ထိန်းသိမ်းမှု၌ အမျိုးသမီးတို့မှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေကြောင်း သူက ဤအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်ထဲမှာပင် သာဓကပြထား၏။ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပြုမူဆောင်ရွက်မှု အကန့်အသတ်များကြားမှ အမျိုးသမီးတို့သည် အထင်ကရ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ၊ မဒ်ရဆာများသို့သွား၍ တက်ရောက်သင်ယူခြင်းနှင့် သင်ကြားခြင်းများကိုလည်းကောင်း၊ အသိပညာအလို့ငှာ ခရီးပြင်းထွက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဟဒီးဆ်ဆင့်ပြန်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဓမ္မသတ်များပေးခြင်းကိုလည်းကောင်း အစရှိသဖြင့် မပြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အထူးကျော်စောထင်ရှားလှသည့် အမျိုးသားပညာရှင်အချို့က သူတို့၏ ပညာပေးသူဆရာမများ၏ပညာရေးအပေါ် မှီခိုအားထားခြင်းနှင့် ချီးမွှမ်းခြင်းတို့အား တွေ့ရပေသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ အမျိုးသမီးပညာရှင်များ၏ ပေါက်ရောက်မှုမှာ ခြွင်းချက်များ မဟုတ်ဘဲ စံပြုချက်ပင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။
အဆိုပါ အလ်မုဟဒ္ဒိဆဟ်ကျမ်းပါ အချက်အလက်များအပေါ် အကျယ်တ၀င့်လေ့လာဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် အစ္စလာမ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အမျိုးသမီးတို့၏အရေးပါမှုကိုလည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့၏ အတိတ်အောင်မြင်မှုနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများကိုလည်းကောင်း သိနားလည်စေမည်ဖြစ်၏။ ဒေါက်တာ နဒ်ဝီ ၏ စုဆောင်းကျမ်းက ထပ်တိုးလေ့လာရန်၊ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်၊ သုတေသနပြုရန်အတွက် အလွန်ပင် အထောက်အကူပြုလျက် ရှိပါသည်။ (Foot Note2)
၃(ခ)။ မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသမီး ဒီပနီစွယ်စုံကျမ်း
အာအိရှဟ် အဗ်ဒုရ်ရဟ်မာန်း ဗျူလေးသည် သူမ၏ Islam: The Empowering of Women စာအုပ်ကို နောက်ဆက်တွဲတိုးချဲ့မှုအဖြစ် Muslim Women: A Biographical Dictionary မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသမီး ဒီပနီစွယ်စုံကျမ်းကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေလိုက်၏။ ၎င်း၌ ဟိဂ်ျရီ ပထမရာစုနှစ်မှ ဟိဂ်ျရီ ၁၃ ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်အထိ အစ္စလာမ့်သမိုင်းတစ်လျှောက် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာတို့ကို အဘိဓာန်အသွင်ဖြင့် စုစည်းဖော်ပြထားသဖြင့် အချိန်အခါနှင့်အညီ အလွန်အားထားစရာကျမ်းကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်း၌ ရာစုနှစ်
၁၄ ခုအတွင်းရှိ မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတို့သည် ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အစရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် အောင်မြင်ထွန်းပေါက်ခဲ့သလို မယားဝတ်နှင့် မိခင်ဝတ်များလည်း မလစ်ဟင်းခဲ့သည့်အကြောင်းတို့အား အနုစိပ်ထည့်သွင်းတင်ပြထား၏။ (Foot Note 3)
အမျိုးသမီးပညာရှင်များဆိုင်ရာ အထောက်အထားအချို့အတွက် မကြာခဏ မေတ္တာရပ်ခံချက်များကြောင့် ထိုစာအုပ်ကို စတင်ရေးသားဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူက ဆိုသည်။
“အတ္ထုပ္ပတ္ထိ ကျမ်းကိုးကျမ်းကားအတွက် မွှေနှောက်လေ့လာလိုက်ချိန်မှာ – ပညာရှင်တွေကနေ အုပ်ချုပ်သူများအထိ ဘ၀နယ်ပယ်အားလုံးထဲ ဦးဆောင်ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ အမျိုးသမီး ပမာဏကို အံ့သြခြင်းကြီးစွာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချက်က မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန်တဲ့ ကိုးကားကျမ်းတစ်စောင် ပြုစုဖို့ ဆုံးဖြတ်စေခဲ့တာပါပဲ။ အစ္စလာမ်ထဲက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခေတ်မီအမြင်တွေကို ချပြထားတဲ့အပြင်၊ အစ္စလာမ့်သမိုင်းဦးကနေ လက်ရှိခေတ်အထိ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထူးခြားထိရောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုပုံရိပ်တစ်ရပ်ကို ရရှိစေပါလိမ့်မယ်”။
“ဒီအဘိဓာန်က တမန်တော်ခေတ်ကနေ အကြမ်းအားဖြင့် (အစ္စလာမ် ၁၃ ရာစု) ခရစ် ၁၉ရာစုအလယ်ခေတ်အထိ ကာလအပိုင်းအခြားကို ခြုံလွှမ်းထားပါတယ်။ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်များအပေါ် စေ့စပ်သေချာစွာ ဆင်ခြင်ထောက်ရှုမယ်ဆိုရင် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်တွင်းပုန်း
အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘာလ်ခါတွင် ရှိုင်းခ် ဗဟာအုဒ္ဒီးန် ဗီလာ၏တရားပွဲသို့ ကပ်လျက်အခန်းတစ်ခုမှ နာယူနေကြသည့် အမျိုးသမီးများ။
ခိုင်းထားခြင်း အလျဉ်း မရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ကြရမှာပါ။ သူတို့ဟာ ကဏ္ဍအများအပြားမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ သီးသန့်ကိစ္စတစ်ခုခု ဆိုရုံမျှသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှုပ်ထွေးပွေလီဆက်စပ်နေသမျှတွေထဲ ပါဝင်နေခဲ့ကြတာပါ။ သိကြတဲ့အတိုင်း အမျိုးသမီးတွေကတော့ အရာရာကို သိချင်လုပ်ချင်ပါဝင်ချင်ကြတာကိုး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအချက်က အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်မှု ဖြစ်သွားစေတတ်တာကို ဒီဖော်ပြချက်အကြောင်းရပ်တွေထဲမှာ တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်”။
အဆိုပါဖော်ကျူးချက်များမှာ ကိုးကားမှီငြမ်းမှုများစွာဖြင့် ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတ္ထုပ္ပတ္ထိစုစည်းချက် အများအပြားကို အိဗ်နု စအဒ်၏ Tabaqat ကျမ်းအတွဲ ၈ နှင့် အလ်စခါဝီ၏ ကိသာ့ဗွန် နိစာ့အ် ကဲ့သို့ ကျမ်းများရှိ အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာ သီးသန့်ဖော်ပြမှုကဏ္ဍမှ ထုတ်နှုတ်မှီငြမ်းထားသည်။ ရံဖန်ရံခါ အခြားရင်းမြစ်များမှလည်း ကိုးကားသည်။ လေးစားဖွယ် ကျော်ကြားထင်ရှားသည့် ပညာရှင်စွာတို့က သူတို့၏ ဆရာအာစိရိယများကို ဖော်ပြရာဝယ် ၎င်းတို့အနက် အမျိုးသမီးအများအပြား ပါဝင်နေပါသည်။ အိဗ်နု ဟဂျားရ်သည် အမျိုးသမီး ၅၃ ဦးထံမှ လေ့လာသည် ။ စခါစီသည် အမျိုးသမီး ၆၈ ဦးထံမှ အိဂျာဇဟ် (ပြန်လည်ဖြန့်ချိရေးခွင့်ပြုချက်) ရရှိသည်။ ဆူယူသွီ၏လမ်းပြဆရာများ အနက် လေးပုံတစ်ပုံ (၃၃ ဦး)မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိကာလတွင် မှီငြမ်းကိုးကားနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးကျမ်းမှာ ‘Umar Rida Kahhala ၏ A’lam an-Nisa’ ဖြစ်၍ ထူးခြားထင်ရှားသည့် အမျိုးသမီးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတွဲ ငါးတွဲအထိပါရှိကာ အထူးပင် စုံလင်လှချေသည်။ (Foot Note 4)
1 – (ကြည့် – Oxford: Interface Publications, 2007 – hardcover and paperback)
2 – (ကြည့် – Over the last few years Dr. Nadwi has, on several occasions and in different cities, given an introductory talk on the public authority and achievements of the women scholars of hadîth. One of those talks was given in New York. Carla Power,aLondon-based journalist attended that occasion, and has since reflected upon Akram Nadwi’s work inamagazine article published by the New York Times (25 February 2007): see A Secret History. A follow-up article, done after an interview with the author in Oxford, was published in the London Times, 14 April 2007. For another article, also after an interview with Akram Nadwi, this one in Arabic. Read alsoaPDF file (17 pp.) of Akram Nadwi’s introductory talk on the
women scholars in Islam)
3 – (ကြည့် – Aisha Abdurrahman Bewley, Muslim Women: A Biographical Dictionary, Ta-Ha Publishers, 2004.)
4- (ကြည့် – Aisha Abdurrahman Bewley, Muslim Women: A Biographical Dictionary, Ta-Ha Publishers, 2004; introduction.)